Writing Week (3) - Smart OET Training Centre
Writing Week (3)
Week3– Day 1 Plan
Day 1 Lessons ➡ Week3Day 1 တွင်လေ့လာရမည့် သင်ခန်းစာများမှာ WritingaReferral Letter Letter Writing Exercises ➡ Day 1 တွင် Letter တစ်စောင်လုံး ရေးနည်းကို လေ့လာရပါမည် ➡ Exercises များနှင့်လဲ လေ့ကျင့်ပေးထားပါသည် ➡ အောက်ဖက်မှ Mark complete ကို နှိပ်၍ ရှေ့ဆက်သွားနိုင်ပါသည်
🔸 ဒီ Lecture Video ထဲမှာ OET Letter တစ်ပုဒ်ကို အစအဆုံး ရေးနည်း ရှင်းပြပေးထားပါတယ် 🔸 Lecture Video ကို မကြည့်ခင် အောက်မှာ ပေးထားတဲ့ Case Notes ကို တစ်ခေါက်ဖတ်ထားပါ 🔸 Case Notes ဖတ်ပြီးမှသာ Video ကို ကြည့်ပေးပါ 🔸 Letter pdf file ကိုလဲ download လုပ်ထားနိုင်ပါသည် DOWNLOAD WritingaReferral Letter 🔸Duration = 39 minutes 🔸 Lecture Video ကို ကြည့်တဲ့အခါမှာ စာလုံးတွေ ... Read more Letter (1)
🔸 ဒီလေ့ကျင့်ခန်းမှာလဲ Letter တစ်စောင်ကို အစအဆုံး ရေးရပါမယ် 🔸 ပေးထားသော Case Notes ကို ဖတ်ပြီး Letter ကို ရေးပါ 🔸 ဒီ Letter က ရှေ့လေ့ကျင့်ခန်းများမှာ တစ်ပိုင်းစီ ရေးကျင့်ခဲ့တဲ့ Letter ကို ပြန်စုစည်းရေးရတာဖြစ်လို့ အကြောင်းအရာ ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်ပါသည် 🔸 Letter ၏ ဖွဲ့စည်းပုံကို ဦးစားပေးရေးကျင့်ပါ 🔸 Letter pdf file ကိုလဲ download လုပ်ထားနိုင်ပါသည် DOWNLOAD Letter ကို အစ အဆုံး ရေးပြီး မိမိအဆင်ပြေသည့်နည်းနှင့် Upload လုပ်ပေးပါ 🔸 Computer Microsoft Word file နှင့် ... Read more Letter (2)
Week3– Day 1 Summary
Congratulation! You have completed Day 1 Lessons. Summary of Day 1 Lessons WritingaReferral Letter Letter Writing Exercises ➡ Day 1 တွင် Letter တစ်စောင်လုံး ရေးနည်းကို လေ့လာခဲ့ရသောကြောင့် ရှေ့လေ့ကျင့်ခန်းများတွင် Letter များကို ဆက်၍လေ့ကျင့် ရပါမည် ➡ Letter များကို ရေးပြီး အချိန်မှန်ထပ်ရန် အရေးကြီးပါသည်။ သို့မှသာ ပုံမှန် Writing ရေးဖြစ်ပြီး Feedback ကိုလဲ သေချာပြန်ပေးနိုင်ပါမည် ➡ ဤသင်ခန်းစာများကိုလည်း ကြေညက်အောင် အချိန်မရွေး ထပ်ခါလေ့ကျင့်၍ ရပါသည် ➡ အောက်ဖက်မှ Mark Complete ... Read more Week3– Day 1 Summary
Week3– Day2Plan
Day2Lessons ➡ Day2တွင်လေ့လာရမည့် သင်ခန်းစာများမှာ Sample Letters (1 + 2) Letter Writing Exercises (3 + 4) ➡ Day2တွင် Day 1 တွင် လေ့ကျင့်ထားသော Letter ၂စောင်ကို ရေးထားသော Sample Letter များကို လေ့လာရပါမည် ➡ ထို့နောက် Letter အသစ် ၂စောင်ကိုလဲ ထပ်လေ့ကျင့်ရပါမည် ➡ Letter များကို လွယ်ကူသော ပုံစံမှ တဖြည်းဖြည်း Level မြှင့်ပေးထားသောကြောင့် ပုံမှန်ရေးသားလေ့ကျင့်ရန် လိုအပ်ပါသည်
🔸 Video ထဲတွင် Letter (1) ကို ရေးထားသော Sample answer ကို ရှင်းပြပေးထားပါသည် 🔸 ရှေ့တွင် ရေးခဲ့သော Letter (1) သည် Official OET page မှ ဖြစ်သောကြောင့် Official Sample answer အဖြေကို လေ့လာကြည့်ပါမည် 🔸 ပေးထားသော Sample letter ကိုဖတ်ပြီးမှ Video ကို ကြည့်ပေးပါ 🔸 Sample Letter pdf file ကိုလဲ download လုပ်ထားနိုင်ပါသည် DOWNLOAD Sample Letter (1) Explanation 🔸Duration = 23 minutes 🔸 Video ... Read more Sample Letter (1)
🔸 Video ထဲတွင် Letter (2) ကို ရေးထားသော Sample answer ကို ရှင်းပြပေးထားပါသည် 🔸 ပေးထားသော Sample letter ကိုဖတ်ပြီးမှ Video ကို ကြည့်ပေးပါ 🔸 Sample Letter pdf file ကိုလဲ download လုပ်ထားနိုင်ပါသည် DOWNLOAD Sample Letter (2) Explanation 🔸Duration =9minutes 🔸 Video ကို ကြည့်တဲ့အခါမှာ စာလုံးတွေ ကြည်အောင် Resolution ကို မြှင့်လို့ ရပါသည် 🔸 Mark Complete ကိုနှိပ်ပြီး ရှေ့သို့ ဆက်သွားနိုင်ပါသည်
🔸 ဒီလေ့ကျင့်ခန်းတွင်လဲ Letter တစ်စောင်ကို အစအဆုံး ရေးရပါမည် 🔸 ပေးထားသော Case Notes ကို ဖတ်ပြီး Letter ကို ရေးပါ 🔸 Letter pdf file ကိုလဲ download လုပ်ထားနိုင်ပါသည် DOWNLOAD Letter ကို အစ အဆုံး ရေးပြီး မိမိအဆင်ပြေသည့်နည်းနှင့် Upload လုပ်ပေးပါ 🔸 Computer Microsoft Word file နှင့် တင်လျှင် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည် 🔸 လက်ရေးနှင့် ရေးထားသော Letter များကိုလဲ ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီး တင်နိုင်ပါသည် 🔸 သို့သော် လက်ရေးပီသမှုတော့ ရှိဖို့လိုပါသည်။ လက်ရေးနှင့်ရေးလျှင် တစ်ကြောင်းခြားလောက်ရေး ပေးပါက ပိုအဆင်ပြေပါသည် 🔸 ... Read more Letter (3)
🔸 ဒီလေ့ကျင့်ခန်းတွင်လဲ Letter တစ်စောင်ကို အစအဆုံး ရေးရပါမည် 🔸 ပေးထားသော Case Notes ကို ဖတ်ပြီး Letter ကို ရေးပါ 🔸 Letter pdf file ကိုလဲ download လုပ်ထားနိုင်ပါသည် DOWNLOAD Letter ကို အစ အဆုံး ရေးပြီး မိမိအဆင်ပြေသည့်နည်းနှင့် Upload လုပ်ပေးပါ 🔸 Computer Microsoft Word file နှင့် တင်လျှင် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည် 🔸 လက်ရေးနှင့် ရေးထားသော Letter များကိုလဲ ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီး တင်နိုင်ပါသည် 🔸 သို့သော် လက်ရေးပီသမှုတော့ ရှိဖို့လိုပါသည်။ လက်ရေးနှင့်ရေးလျှင် တစ်ကြောင်းခြားလောက်ရေး ပေးပါက ပိုအဆင်ပြေပါသည် ... Read more Letter (4)
Week3– Day2Summary
Congratulation! You have completed Day2Lessons. Summary of Day2Lessons Sample Letters (1 + 2) Letter Writing Exercises (3 + 4) ➡ Day2တွင် Day 1 တွင် လေ့ကျင့်ထားသော Letter ၂စောင်ကို ရေးထားသော Sample Letter များကို လေ့လာခဲ့ပြီး Letter အသစ် ၂စောင်ကိုလဲ ထပ်လေ့ကျင့်ရပါမည် ➡ Letter များကို လွယ်ကူသော ပုံစံမှ တဖြည်းဖြည်း Level မြှင့်ပေးထားသောကြောင့် ပုံမှန်ရေးသားလေ့ကျင့်ရန် လိုအပ်ပါသည် ➡ Letter များကို ... Read more Week3– Day2Summary
Week3– Day3Plan
Day3Lessons ➡ Day3တွင်လေ့လာရမည့် သင်ခန်းစာများမှာ Sample Letters (3 + 4) Letter Writing Exercises (5) ➡ Day3တွင် Day2တွင် လေ့ကျင့်ထားသော Letter ၂စောင်ကို ရေးထားသော Sample Letter များကို လေ့လာရပါမည် ➡ ထို့နောက် Letter အသစ် ၁စောင်ကိုလဲ ထပ်လေ့ကျင့်ရပါမည် ➡ Letter များကို လွယ်ကူသော ပုံစံမှ တဖြည်းဖြည်း Level မြှင့်ပေးထားသောကြောင့် ပုံမှန်ရေးသားလေ့ကျင့်ရန် လိုအပ်ပါသည်
Sample Letter (3)
🔸 Video ထဲတွင် Letter (3) ကို ရေးထားသော Sample answer ကို ရှင်းပြပေးထားပါသည် 🔸 ပေးထားသော Sample letter ကိုဖတ်ပြီးမှ Explanation Video ကို ကြည့်ပေးပါ 🔸 Sample Letter pdf file ကိုလဲ download လုပ်ထားနိုင်ပါသည် DOWNLOAD Sample Letter (3) Explanation 🔸Duration = 19 minutes 🔸 Video ကို ကြည့်တဲ့အခါမှာ စာလုံးတွေ ကြည်အောင် Resolution ကို မြှင့်လို့ ရပါတယ် 🔸 Mark Complete ကိုနှိပ်ပြီး ရှေ့သို့ ဆက်သွားနိုင်ပါသည်
Sample Letter (4)
🔸 Video ထဲတွင် Letter (4) ကို ရေးထားသော Sample answer ကို ရှင်းပြပေးထားပါသည် 🔸 ပေးထားသော Sample letter ကိုဖတ်ပြီးမှ Video ကို ကြည့်ပေးပါ 🔸 Sample Letter pdf file ကိုလဲ download လုပ်ထားနိုင်ပါသည် DOWNLOAD Sample Letter (4) Explanation 🔸Duration = 14 minutes 🔸 Video ကို ကြည့်တဲ့အခါမှာ စာလုံးတွေ ကြည်အောင် Resolution ကို မြှင့်လို့ ရပါသည် 🔸 Mark Complete ကိုနှိပ်ပြီး ရှေ့သို့ ဆက်သွားနိုင်ပါသည်
🔸 ဒီလေ့ကျင့်ခန်းတွင် Letter တစ်စောင်ကို အစအဆုံး ရေးရပါမည် 🔸 ပေးထားသော Case Notes ကို ဖတ်ပြီး Letter ကို ရေးပါ 🔸 Letter pdf file ကိုလဲ download လုပ်ထားနိုင်ပါသည် DOWNLOAD Letter ကို အစ အဆုံး ရေးပြီး မိမိအဆင်ပြေသည့်နည်းနှင့် Upload လုပ်ပေးပါ 🔸 Computer Microsoft Word file နှင့် တင်လျှင် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည် 🔸 လက်ရေးနှင့် ရေးထားသော Letter များကိုလဲ ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီး တင်နိုင်ပါသည် 🔸 သို့သော် လက်ရေးပီသမှုတော့ ရှိဖို့လိုပါသည်။ လက်ရေးနှင့်ရေးလျှင် တစ်ကြောင်းခြားလောက်ရေး ပေးပါက ပိုအဆင်ပြေပါသည် 🔸 File ... Read more Letter (5)
Week3– Day3Summary
Congratulation! You have completed Day3Lessons. Summary of Day3Lessons Sample Letters (3 + 4) Letter Writing Exercises (5) ➡ Day3တွင် Day2တွင် လေ့ကျင့်ထားသော Letter ၂စောင်ကို ရေးထားသော Sample Letter များကို လေ့လာခဲ့ပြီး Letter အသစ် ၁ စောင်ကိုလဲ ထပ်လေ့ကျင့်ပေးထားပါသည် ➡ Letter များကို လွယ်ကူသော ပုံစံမှ တဖြည်းဖြည်း Level မြှင့်ပေးထားသောကြောင့် ပုံမှန်ရေးသားလေ့ကျင့်ရန် လိုအပ်ပါသည် ➡ Letter များကို ရေးပြီး ... Read more Week3– Day3Summary